A ga -emepe nnukwu nchekwa nduku mgbe emezigharị ya na mpaghara Moscow - akwụkwọ akụkọ "Potato System"
Isi Omume / Etu Nhazi nke nchekwa
в News, Nhazi nke nchekwa, Akụkọ mpaghara
Onye minista ọrụ ugbo na nri nke mpaghara Moscow Sergei Voskresensky na Septemba 6, mgbe a rụzigharịchara ya, ga -emepe nnukwu ebe nchekwa nduku na mpaghara Taldomsky nke mpaghara Moscow.
"Agrofirm" Bunyatino "emechala mmejuputa oru ngo maka nwughari ebe nchekwa nduku na mpaghara Taldomsky. Mkpokọta mpaghara nwughari bụ 5 sq. M. Ọnụ ego itinye ego na akụrụngwa ahụ bụ nde 188 rubles, "Sergei Voskresensky kwuru.
Akwụkwọ nri ndị dị n'èzí, ọkachasị poteto, bụ ngwaahịa oge. Dị ka onye ozi ahụ kwuru, ebe ọ bụ inye ndị mmadụ akwụkwọ nri bụ ọrụ otu afọ, ọ dị mkpa ịrụ sistemụ nchekwa echekwara.
“Inye ndị mmadụ akwụkwọ nri n'afọ niile ga-ekwe omume site na usoro nchekwa siri ike. Ike nke nchekwa nduku ọhụrụ bụ tọn 10. Ka ọ dị ugbu a, enwere mpaghara nduku 360 na mpaghara Moscow nwere ikike nke puku tọn 205, ọtụtụ n'ime ha na -emezu ihe achọrọ maka ịchekwa poteto, "Sergei Voskresensky kwusiri ike.
JSC "Agrofirm" Bunyatino "bụ akụkụ nke otu ụlọ ọrụ" akwụkwọ nri Dmitrovskie ", nke bụ nnukwu akwụkwọ nri mechiri emechi na mpaghara.
“N'afọ gara aga, olu nke nduku na mpaghara Moscow ruru ihe dị ka puku tọn 290. N'ime ndị a, ihe dị ka puku tọn iri atọ na atọ ka akwụkwọ nri "Dmitrovskie" mepụtara, nke karịrị 33% nke mmepụta mpaghara. N'afọ a, ha kụrụ nduku na mpaghara puku hectare 10 ma na -amalite ugbu a na -ewe ihe ubi nke ọma, "Sergei Voskresensky kwukwara na mmechi ya.
Tags: "Dmitrovskie inine"Nchekwa ndukuMpaghara Moscow